मंगलवार, फेब्रुअरी 13, 2007 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
आज बिहान म कारमा बाहिर निस्कँदा मलाई तुरुन्तै राम्रो बरफको आँधीबेहरी लगे। कल्पना गर्नुहोस् वर्षा, भर्खरै जमेको। मैले मेरो कार (फोर्ड 500००) मा बरफको शेल तोड्नुपर्‍यो र हिजोको १० इन्च हिउँ पछाडि सफा गर्नुपर्छ। बच्चाहरू घरमै थिए - स्कूल रद्द गरियो। मैले धेरै समस्या बिना काम गर्नका लागि बनाएको छु AWD).
मैले हिउँमा काम गर्न blocks ब्लकलाई बढावा दिएँ र धेरै थाँहा भए (हो, मलाई थाहा छ ... वजन घटाउनुहोस्!)। काममा, ब्यागल्स र फलहरूको राम्रो व्यवस्थाले यसमा बहादुरी देखाउने केही व्यक्तिहरूको प्रतिक्षा गर्यो। floor०+ अन्य व्यक्तिहरूसँग फ्लोरमा, मलाई लाग्छ म of मध्ये एक हुँ जसले यसलाई अफिसमा ल्यायो। म इण्डियानापोलिसको दक्षिणमा बस्दछु र नर्थसाइड वास्तवमै खराब कुटपिट गरियो! र आज राती त्यहाँ दोहोर्याइएको छ:
बाट पिक शुभकामना टिभी:
इंडियानापोलिस एक सुन्दर शहर हो जब यो सुँघ्छ। वास्तुकला र स्मारकहरू हिउँसँग नाजुक रूपमा तिनीहरूसँग टाँसिएर अविश्वसनीय देखिन्छन्। काश आज म क्यामेराको साथ हिड्न सक्दछु ... तर त्यहाँ गर्नुपर्ने काम थियो।
काम गर्नु साँच्चै चुनौती थियो। मैले दिन इन्स्ट्यान्ट मेसेन्जर र फोनमा बिताए। हामीसँग पेशेवरहरूको एक संलग्न टोली मिल्यो जुन अर्को वर्षको सुरूमा उत्कृष्ट रिलीजमा गति निर्माण गर्न सुरू गरिरहेछ। अरूलाई विचारहरू उधारो दिन र कमेन्ट्रीलाई वास्तवमै उत्पादनशील हुन गाह्रो बनाएको छैन, त्यसैले मैले आफूलाई कागजातहरूमा गाडिदें र केही प्रोटोटाइप गरें।
सवारी घर एकदम शान्त थियो। सडक खाली भएपछि, मैले मेरो छोरा लिने निर्णय गरें, बिल, हिउँमा ड्राईभ गर्न केहि अनुभव प्राप्त गर्न। हामीले हिउँको एक खुट्टामा एक विशाल खाली स्थान भेट्टायौं र मैले उसलाई केहि डोनट्स गर्न, नियन्त्रण अभ्यास गुमाउने, स्लाइडि quick र द्रुत ब्रेकिंग गर्ने कार्य गर्यो ... कारले कसरी ह्यान्डल गर्यो भन्नेमा उनी छक्क चकित भए (जसरी म पनि थिएँ) ... एन्टीलॉक ब्रेक, ट्र्याक्शन नियन्त्रण, र सबै व्हील ड्राइव वास्तवमै यति धेरै नियन्त्रण प्रदान गर्दछ। याे अास्चर्यजनक छ। उसले करीव minutes० मिनेट अभ्यास गर्‍यो र त्यसपछि कसैले पुलिसलाई बोलाएर हामी यताउता गडबडी भएको सोचेमा मात्र हामी गयौं।
हामी द्रुत डिनरको लागि रोक्यौं र म घर पुगेँ र केहि PHP र साथ खेल सुरु गरें टेक्नोराटीको एपीआई। केहि कोड नमूनाहरु लाई आफ्नो साइट मा साल मा छोएको छैन (स ,्केत, सint्केत)। पीएचपी's को XML अन्तर्निहित ह्यान्डलिंगको साथ, मलाई आशा छ कि कसैले चाँडै केहि अपडेट गरेमा। मैले केहि कोड लेखें तर वास्तवमा PHP मार्फत मान्य प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्न सकिएन ... त्यसैले अब म निराश छु र यसलाई एक रात भनिरहेछु। मलाई विश्वास छैन कि यो उनीहरूको एपीआई हो ... म कुनै समस्या बिना ब्राउजरमा मेरो अनुरोध काट्न र टाँस्न सक्छु।
मेरो आशा छ कि एक राम्रो विजेट निर्माण गर्ने जुन ब्लगको प्रोफाइल प्रदान गर्दछ ... रैंकिंग, भर्खरको पोष्टहरू, ट्याग क्लाउड, इत्यादि कि यसलाई कि त यो तपाईंको आफ्नै ब्लगमा पोष्ट गर्न वा कसैको एल्स देखाउन सजिलो छ। म त्यहाँ पुग्छु, तर म यसलाई एक रात कल गर्दैछु। माफ गर्नुहोस्, यो अधिक उपयोगी पोष्ट होइन! म छिट्टै ट्र्याकमा फर्कनेछु!
म भोलि हाइकको लागि केही निद्रा लिन गइरहेको छु!
म किन ब्लग गर्छु?
के dmoz मरेको छ?
म वास्तवमै ट्र्याकब्याकहरूको बारेमा केही जानकारी हेर्दै थिए (जुन मैले तपाईंको साइटलाई फेला पारे) तर म विश्वास गर्न सक्दिन, म यहाँ ग्राफिकमा के देख्छु! मैले रिचमण्डदेखि टाढासम्म काम गरिनँ, त्यसैले यो सबै हिउँ मेरो लागि अचम्मको देखिन्छ! वाह! 🙂
के तपाईंले ट्र्याकब्याक्स माकीकमा के चाहानु भएको पाउनुभयो? मैले एउटा पोष्ट गरे यहाँ.
भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यबाद! आज हामीसँग एक राम्रो 'उडाउने' हिउँ तूफान छ तर यो आज दिउँसोसम्म खाली हुनुपर्छ।
हह, हो मैले जे खोज्दै थिएँ - धन्यवाद। के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ किन WP Serendipity भन्दा राम्रो छ? मैले भर्खरै मेरो वेबलग सुरू गरें तर सेरेन्डिपिटी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै - तपाईलाई यो थाहा छ?
[म पोल्याण्डबाट आएको हुँ, हाल जर्मनीमा बसिरहेको छु - मेरो लागि ती आँधीबेहरी कुनै अनौठो होइन - तर तपाईंको क्षेत्रमा यो एकदम विरलै छ - रमाइलो गर्नुहोस् !!!]
परिचित भइरहेको छैन Serendipity, म यसको प्रयोगबाट तपाईंलाई अस्वीकार गर्न चाहन्न। म WordPress को प्रशंसक हुँ किनभने यसलाई अनुकूलित गर्न को क्षमता र यसमा वेब उपस्थिति छ। मलाई लाग्छ कि ब्लगि software सफ्टवेयरको सुविधाहरू झन् झन् धेरै मानक बन्न गइरहेका छन् (पिंगहरू, ट्र्याकब्याकहरू, टिप्पणीहरू, ब्लगरोलहरू, आदि), त्यसैले यदि तपाईंलाई यो मनपर्दछ भने - त्यसो भए जानुहोस्!
मैले पढेको एउटा लेखले सेरेन्डिपिटीलाई धेरै उच्च रूपमा राख्यो र फिचरले वर्डप्रेससँग मिल्दोजुल्दो सेट मिलायो, ​​त्यसैले मलाई यो यकिन छैन कि एउटा अर्को भन्दा राम्रो छ।